Soo Celinta Tayada Wasaarada Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ee Puntland | Puntland Online
Soo Celinta Tayada Wasaarada Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ee Puntland
Tan iyo intii Wasiir Dr. Shire Xaaji Faarax wasaarada Qorsheynta iyo Xiriirka caalamiga uu xilka la wareegay waxaa isbedel weyn oo aad loo dareemay laga sameeyey howlaha iyo waxqabadka Wasaarada Qorsheynta ee Puntland.
Wasiirku wuxuu dib u habeyn la taabankaro ku sameeyey habsami u socodka shaqada wasaarada, wuxuu bilaabay inuu eego oo u kuur galo qaybaha kala duwan ee wasaarada Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamigaa asaga oo shirar kala duwan la yeeshay madaxda iyo shaqaalaha laamaha kala duwan ee Wasaarada si uu u ogaado in wasaaradu shaqadeeda u gudanaysay sidii la rabay iyo in kale uuna markaa talaabo uga qaado howlaha habacsan ee wasaarada.
Waxaa durbadiiba u soo baxay wasiirka in shaqooyin badan oo wasaaradu lahayd ay dayacmeen sida xiriirka Caalamiga, la xisaabtanka Hay’adaha Caalamigaa iyo kuwa wadanigaaba, ururinta xogta rasmigaa ee Qorsheynta iyo maareynta mashaariicda laga hir gelinayo deegaanada Dowladda Puntland, soo bandhigida xogaha ku saabsan horumarinta iyo ka warqabida heerka horumarineed ee uu marayo dalka iyo dadkuba dhamaan deegaanda Puntland.
Si hadaba howlahaas oo dhan wax looga qabto wasiirku wuxuu bilaabay inuu amar ku bixiyo in dhamaan hay’adda Puntland ka shaqeeya ay wasaarada si toos ah ugu soo gudbiyaan howlahooda shaqo, wuxuu shirar isdaba joog ah u qabtay madaxda iyo shaqaalaha hay’addah caalamigaa asaga oo ku amray inay wasaarada ay ka amarqaataan ayna qaban karin wax shaqo ah oo aan wasaarada Qorsheynta ogeyn ama aysan fasixin, wuxuu wasirku shirar la yeeshay madaxda sarsarre ee hay’adda marar uu socdaalo ku tegay Muqdisho iyo Nairobi taas oo uu ugu gudbinayey siyaasadiisa ku wajahan waxqabadka wasaarada iyo in loo hogaansamo amaradiisa, taas oo dhamaan hay’adda ah ay aqbaleen ayna aad u soo dhoweeyeen .
Isla arimaha hay’addaha waxaa wasiirku xoog saaray shaqaalaha kala duwan ee hay’addaha ee Soomaalida ah iyo kuwa ajnebiga ahba inay la soo socodsiiyaan wasaarada arimahooda shaqo hadii kale talaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo cidii ku xadgudubta arimaha la farayo, taas oo iyadana ay si weyn u soo dhoweeyeen dhamaan shaqaalaha hay’adda caalamigaa iyo kuwa maxaligaaba.
Waxuu kaloo wasiirku uu dib u habeyn ku sameeyey shaqaalaha wasaarada, xafiisyada wasaarada, qaybaha wasaarada ee Golobada iyo habka wada shaqeynta shaqaalaha wasaarada qaybaheeda kala duwan isaga oo amar ku bixiyey in qof kasta uu shaqada soo galo ka hor 7bada subaxnimo ayna howlahooda shaqo wataan ilaa iyo 2da duhurkii, hadii loo baahdana ay intaa kabadan ay shaqeeyaan, taas oo uu wasiirku ku daray inay si toos ah u helayaan mushaharkooda bil walba shaqaalaha dhamaan.
Wasiirka wuxuu durbadiiba dareemay in baahi loo qabo in la helo shaqaale xirfad leh oo xoojiya shaqaalaha wasaarada taas oo uu wasiirku u howl galay sidii uu dakhli ugu heli lahaa inuu qaato shaqaale consultants ah oo tayo leh taas oo uu si weyn ugu guulaystay dhamaantood uuna ka helay hay’addaha caalamigaa ee taageera Dowladda Puntland maalgelinta shaqaalahaas xirfadlayaasha ah mushaharaadkooda.
Madaama wasaaradu tahay albaabka laga soo galo dowladda Puntland iyo weliba isha hagta horumarinta mashaariicda iyo wax u qabashada bulshada Puntland wuxuu wasiirku tayeeyey habka ururinta xogta (statistics t) iyo in la soo bandhigo marwalba xogaha horumarinta ee socda iyo kuwa loo baahan yahay. Wuxuu wasiirku markii ugu horeeysay abidkeed asaasay xafiiska keydinta xogaha wasaarada (Archive Office) kaas oo looga goleeyahay in lagu keydiy xoggaha ay wasaaradu ururiso, iyo lagu keydiyo macluumaadka muhiimka u ah dalka iyo dadka ayna noqoto meel keydisa xogahaas kana ilaalisa in xoguhu dhumaan taas oo caado u ahayd wasaarada intii wasiirka uusan iman ka hor.
Wasaarada Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamigaa ee Puntland waxay u muuqataa mid wadadii la rabay hore u qaaday oo tayadeedii lasoo celiyey tan iyo intii Wasiir Dr. Shire Xaaji Faarax uu xilka la wareegay.
Xafiiska xiriirka dadweynaha ee Wasaarada Qorsheyna iyo Xiriirka Caalamiga